Category talk:Dagaalada - Wikipedia
dagaalkii ogaadeeniya[wax ka badal xogta]
Dagaalka Ogaadeenya wuxuu ahaa kii ugu milgaha culsaa dagaalladii dunida ka dhacay xilligii uu socday Dagaalka Qaboow. Waxaa xusid mudan in dagaal kasta oo xilligaas dhacay ay xoogaggii dunida si buuxda u kala safteen. Dagaalkanse wuxuu ahaa mid gudihiisa ay isku kala fireeyeen labadii quwadood ee dunida ugu xooga weynaa. Dalkii la oran jiray Midowga Soofyeeti, oo markuu dagaalka bilowda la dhan ahaa Soomaalida ayaa markuu dagaalkii dhamaaday ka dhan ahaa. Waxaa taas ka soo horjeeday Mareekanka oo Itoobiya ku sugnaa bilowgii dagaalka ayaa dhanka Soomaaliya ka soo saftay.
Labada quwadood oo ku hardamayay D. Q. (SSR & USA), waxaa mid waliba ku daba safnaa ummado badan oo sababo kala duwan iyo doon-doon maslaxadeed, hiilo la garab taagnaa. Sababahaasi waxay isugu jireen dano siyaasadeed, dano ciidameed, dano dhaqaale iyo dano diineed. Soomaalidu waxay ahaayeen kuwo baadi-goob ugu jira baylahdood maqan oo ay muddo raadkeeda hayeen, taas oo goortii la dhacay iyo raggii dhacayba ay u xusan yihiin. Itoobiya ayaa iyaduna u muqatay dal difaacaya jiritaankiisa dowladnimo iyo is-heysashada dalkeeda.
Qarnigii XX-aad, waxaa dunida ka dhacay dagaallo caalami ah, kuwaas oo galaaftay naf iyo maal badan. Bulshada Soomaaliya, inkasta oo tirada dadkeedu uu yar-yahay, misana degaanka istraateejiga ah oo ay dadkeedu ku nool yihiin dartiis, ayaa wuxuu kalifay in ay, qayb aanan la dhayalsan karin ka qaataan dagaalladii caalamiga ahaa.
Dagaalkii I-aad, kii II-aad iyo Dagaalkii Qaboobaa ayaa waxay yihiin dagaallada waaweyn ee qarnigii tegay sida xoogan ugu baahay dunida guudkeeda. Dagaalladii Daraawiishta ayaa waxay socdeen sanooyin badan intuusan dagaalkii I-aad dunida ka qarxin. Markuu joogsadayna, dagaalladii Soomaaliya ka socday waa ay ka danbeeyeen. Sidoo kale lix sano horteed ayaa degaankayaga hur ka baxayay intuusan dagaalkii II-aad bilaaban, kaas oo hardidiisii ay gaartay dhamaan gobollada Soomaaliyeed. Dagaalkii Ogaadeenya ayaa isna ah mid taariikhda inoo galay oo safxado badan ka qaatay qoraallada laga allifay Dagaalkii Qaboobaa.
Sanadkii 1945-kii, waxaa dhamaaday dagaalkii II-aad ee aduunka. Waxaa halkaas ku soo af-jarmay itaalkii ay lahaayeen dadyowgii dunida ku amar ku-taaglayn jiray qarniga qaybtiisii hore. Waxaa safka hore kaga jiray Ingiriis, Faransiis iyo Jabaan. Waxaa isna dagaalkii ku jabay Jarmalka oo markaas xag dhaqaale iyo xag sancaba ka soo xoogoobayay. Dowladahaas aanu soo xusnay, xoogoodii wuxuu ku wiiqmay dagaalka. Dabadeed waxaa halkaas ka abuurmay laba xoog oo cusub. Waa Mareekan iyo Midowga Soofyeeti. Jarmalka oo ahaa dowladda hurinaysay dabkii dagaalkan ayaa jabay markii ciidamada labadaas dal ay ku soo biireen gulufyadii colaadeed ee Jarmalka lagaga soo hor jeeday. Ciidankii Casaa ee Soofyeetiga the red army waxay u soo dhaqaaqeen galbeed, halka kuwii Mareekanka ay u soo dhaqaaqeen bari. Dagaalkii wuxuu joogsaday bartamihii sanadkii 1945-kii, markaas oo ay labada ciidan ku kulmeen webiga la yiraahdo Elbe ee ku yaal bartamaha dhulkii dowladdii laga adkaaday ee Jarmalka.
Inkasta oo la sheego in D. Q. uu bilowday sanadkii 1945-kii, markaas oo uu dhamaaday dagaalkii II-aad ee dunida, misana isu muuqashada labada dowladood ee xooga leh, waxay bilaabatay sanadkii 1948-kii, markaas oo la dhisay derbigii ku teednaa magaalada Berliin, kaas oo u qeybiyay degmada laba qeybood (East Berlin & West Berlin). D. Q. wuxuu dhamaaday sanadkii 1989-kii. Taasina waxay ka dambeysay markii la bur-buriyay drebigii Berliin, xaafadihii degmadana dib laysugu furay.
Ciidamadii xulufada ahaa oo ka dhanka ahaa Jarmalka, guushii ay ka soo hoyeen dagaalka, ayaa waxay abuurtay is-tuhun labada xoog ee waaweyni ay is-dareensadaan. Isu muuqashadooda waxay bilaabatay sanadkii xigay markii uu dhamaaday dagaalka, taas oo si buuxda u istaagay sanadkii 1990-kii. Ooraahda ah Dagaalkii Qaboobaa the cold war, waxaa bixiyay nin la yiraahdo Bernard M. Baruch (bishii abriil, 1947-kii), markaas oo khilaafka labada xoog uu soo if-baxay. Wuxuu ku bilowday muran lagu difaacayo aragti siyaasadeed iyo isu caga-jugleyn ay weheliso is-hubayn.
Dagaalkan oo ahaa colaad buuxda iyo iska soo hor-jeed dhex yiil Mareekan iyo xulufadiisa (dowladaha yurubta galbeed) oo dhan ah iyo Midowga Soofyeeti iyo xulufadiisa (dowladaha yurubta bari) oo dhanka kale ah. Labada quwadood, waxay muddadaas ka fogaadeen inay si toos ah isu hardiyaan. Waxaa casharro lama ilaawaan ah u noqday hoog iyo bi´ii ay ka dhaxleen labadii dagaal ee qaaradda ka huray nuskii hore ee qarniga.
Inkasta oo uu ka dhexeeyay falal colaadeed oo tilmaamaya is-diidanaanta ay isu qabeen, misana muddadii uu D. Q. socday, quwadahaasi waxay ku guuleysteen in ay degaamadooda ka fogeeyaan fagaaraha lagu hardamayo. Falalkaasi waxay isugu jireen dagaallo dowli ah oo dhex mara dowlado aanan iyaga ahayn, hurin dagaallo sokeeye, howlo jaajuusnimo ah, loolan siyaasadeed iyo dhaqaale, is-hubayn iyo khilaafaad diblomaasiyadeed, af-gembiyo ciidameed, saldhigyo laga sameysto dunida dacalladeeda, wada-hadallo qarsoon iyo fadeexooyin siyaasadeed, kuwo dhaqan iyo kuwo dhaqaale. Howlahaas ayaa dowlad waliba waxay ku dooneysay wadiiqadii ay kaga gacan sareyn lahayd tan kale.
Stalin, roosevelt & Churchil Intuusan dagaalku dhamaan, waxaa jiray fadhi ka dhacay dalka Soofyeetiga oo ay isugu yimaadeen saddex madaxweyne oo ka socday dalalka USSR, USA iyo UK. Fadhigaas waxaa loogu magac daray magaaladii uu ka dhacay, waxaana la yiraahdaa Yalta Conference. Mudddada uu socday fadhigu waxay ahayd 4 - 11/ 1945-kii. Hoggaamiyihii Soofyeetiga Joseph Stalin, madaxweynihii Mareekanka Franklin Delano Roosevelt iyo ra´iisul wasaarihii Ingiriiska Winston Churchill ayaa halkaas isgu yimid.
Go´aamadii ay madaxdaasi gaareen ayaa waxay ahaayeen kuwo sir ah oo aanan la baahin sababo ciidan iyo kuwo siyaasadeed awgeed. Waxaa kamid ahaa in dagaalka la wado illaa ay dowladda Jarmalku shuruud la´aan isla dhiibto, dabadeedna dalkeeda loo qaybiyo gobollo federaali ah oo ay dusha ka maamulaan dowladaha xulufada ah. Qorshihii qarsoonaa oo ay dowladahaasi ku heshiiyeen ayaa dhulkii Jarmalka u qaybiyay afar qeybood oo maamul dhexe oo ku meel-gaar ah leh, kaas oo wax ka diyaariya maxkamadihii la saaray denbiilayaashii dagaalka, isla markaasna wuxuu wax ka qiimeeyay dhaawacii uu Jarmalku geystay. Maamulladaas afarta ah waxaa kala hagayay Mareekan Faransiis, Ingiriis iyo Midowga Soofyeeti, waxaana magaalo madax u ahayd Berliin.
Mareekanku wuxuu doonayay oo kale in caalamka uu yeesho ganacsi xor ah. Hoggaamiyihii Soofyeetiga ayaa arintan ku eegay il ay ka muuqato kalsooni darro. Sababtoo ah, Mareekanku wuxuu xilligaas lahaa 75 % wax soo-saarka wershadeed ee dunida. Madaxda Soofyeetigu waxaa u muuqday haddii ganacsiga dunida uu noqdo mid madax-bannaan, in Mareekanku uu si fudud seylado ugu helayo wax soo-saarkiisa xooga badan. Isla markaasna uu sicir jaban ku soo iibsanayo macaadinta uu dibadda uga baahan yahay.
Wada-hadallada ay isugu iman jireen hoggaamiyayaasha dowladaha adkaaday, ayaa Winston Churchill wuxuu Soofyeetiga ku eedayn jiray in ay doonayaan in ay ballaariyaan maamulkooda, iyaga oo baahinaya aragtida shuuciyadda ah. Stalin wuxuu ku dadaalay dhankiisa in uu mag-dhow ka helo wershadaha Jarmalka. Inkasta oo madaxweyne S. Truman uu arintaas diiday, misana Stalin wuxuu ogolaaday tanaasulaad waaweyn. Taas oo uu dhaafsiistay ballan qaad ku saabsan nabadgelyada dalkiisa. Tanaasulka uu Stalin sameeyay baa waxaa kamid ahaa arimahakan :
Isaga oo ciidamadiisa kala baxay kanaalka la yiraahdo Dardanells ee u dhexeeya badda Marmara iyo badda Dhexe (Turkiya).
Isaga oo ka kacay dhul uu ka qabsaday Iiraan ee ku yaal waqooyiga.
Isaga oo oggolaaday in uusan Finland ka dhisin dowlad shuuci ah.
Isaga oo oggolaaday in uusan taageero u fidin dhaqdhaqaaqa shuuciga ah ee ka jira dalka Giriiga oo markaas Ingiriisku maamulayay.
Waxaa kale oo jiray muran ku saabsanaa wejiga ay qaaradda Yurub yeelan doonto mustaqbalka, gaar ahaan Jarmalka oo ahaa dalkii jabay oo la hooshey. Waxaa arintaas xigay, in Soofyeetigu uu faraha la soo galo arimaha dowladihii ka dhisnaa bartamaha Yurub, gaar ahaan degaanka Balkaan. Taasina waxay ka dambeesay markii ay caga-dhigteen maamulladii shuuciga ahaa ee dowlaaddii Midowga Soofyeeti ay ka dhistay bariga qaaradda Yurub. Arinta Balkaan, waxay kordhisay dareenkii dowladaha reer galbeedku ka qabeen Soofyeetiga. Madaxweynihii Mareekanka S. Truman, ayaa wuxuu gudoonshay in dowladdiisu ay taageerto halgamada hubaysan oo lagu diidan yahay cadaadiska siyaasadeed. Aragtidaas oo loo yiqiin Truman-docrine, ayaa soo baxday sanadkii 1947-kii, waxayna ku wajahnayd ka hor-tagga is-ballaarinta shuuciyadda.
Mareekanka, si uu Yurub uga saaro diiftii badnayd ee dagaalka ka soo gaadhay ayuu wuxuu diyaariyay mashruucii la magac baxay Marshall Plane, kaas oo ujeeddadiisu ahayd in qaaradda dib loo dhiso. Waxaa jiray qorshe arintan hoos tiil oo ahayd in uu caqabad hor dhigo faafidda ay aragtida shuuciyaddu ku soo baahayso Yurub. Sidaa darteed, Soofyeetiga iyo dowladihii la xulufada ahaa waa ay diideen in ay qayb ka helaan kaalmada Mareekanka uu bixinayay.
5/ 6- 1947-kii, xoghayihii dowladda Mareekanka George C. Marshall, markii ugu horeesay ayuu ku dhawaaqay howlaha lagu kicinayo dib u habaynta dhismaha hoose ee dowladaha qaaradda Yurub. Qorshahaas oo fulintiisa ay socotay muddadii u dhaxaysay 1948 - 1952, ayaa Mareekanka waxaa kaga baxay dhaqaale ka badan 13 bilyan oo doolar. Xoolahaas waxay ku baxeen kaalmo deyn ah oo loo qaybiyay dhamaan dowladaha Yurubta galbeed. Waxaa halkaas ka abuurmay xiriir is-kaashi oo xagga dhaqaalaha ah ee dhex-maray dowladihii deeqdan qaatay iyo Mareekanka oo deeq-bixiyaha ahaa. Xiriirkaas waxaa lagu magacaabaa ECA (Economic Cooperation Act). --Abdalle 23:41, 11 Sebteembar 2007 (UTC)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Category_talk:Dagaalada&oldid=9788"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Sebteembar 2007, marka ee eheed 23:41.